सन्दिप लामिछानेको गीतको भिडियो रिलिज ( हेर्नुहोस् भिडियो )
काठमाडौं । चर्चित युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेको पहिलो गीतको भिडियो रिलिज भएको छ ।आईपिएलमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेर सवैको मन जित्न सफल सन्दिपले केहि समय अघि ‘उदास मनको’ बोलको गितको अडियो युट्युबमा रिलिज गरेका थिए…
नेपाललाई बिश्वकपमा सहभागी गराउन यी सांसदको सुझाब देखेर दुनियाँ हैरान ( भिडियो सहित )
काठमाडौं : रुसमा हुन लागेको विश्वकप फुटबलको रौनक विश्वभर छाएको छ। त्यसमा ३२ देशले सहभागिता जनाइरहेका छन्। नेपालले भने एकदुई पटक छनोट खेल्नुभन्दा विश्वकपमा सहभागिता जनाउन सकेको छैन। नेपाली दर्शकले भने विश्वकपमा आफ्ना मनपर्ने टिमको…
सन्दिपको घरमा पुग्दा, सन्दिपका बुवा आमाले खोले सन्दिपको भित्रि पोल (हेर्नुहोस भिडियोमा)
चितवन । वर्ष २०१८ को इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट खेल्नका लागि बोलकबोलबाट छानिएका नेपाली उदयीमान क्रिकेटर सन्दीपका बाबु आमाले उनको कडा मिहिनेत नै सफलता भएको छन् । उनको रत्ननगरको सौराहा नजिक रहेको बाघमारा…
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पहिलो गीत ‘उदास’ सार्वजनिक ! हेर्नुस् ( भिडियो सहित )
काठमाडौं : क्रिकेट खेलेर विश्वभर चर्चा कमाएका नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अब गायक भएका छन्। उनले बुधवार आफ्नो पहिलो गीत उदास सार्वजनिक गरेका हुन्। क्रिकेटसँगै गीतसंगीतमा समेत रुचि राख्ने सन्दीपले यसअघि नै गीतको ट्रेजर…
काठमाडौं, जेठ १८ । नेपालका सन्दीप लामिछाने सम्मिलित विश्व–११ टोलीलाई मैत्रीपूर्ण ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट खेलमा वेस्ट इन्डिजले ७२ रनले पराजित गरेको छ । युवा स्पिनर लामिछाने सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को विश्व–११ टोलीले गएराति…
अलजजिरा टेलिभिजनको खुलासा !! क्रिकेटमा यसरी हुन्छ ‘म्याच फिक्सिङ’ ( भिडियो सहित )
काठमाडौं, १४ जेठ । श्रीलंकन क्रिकेट बोर्डले म्याच फिक्सिङ प्रकरणका आरोपी खेलाडी तथा क्युरेटरलाई बर्खास्त गरेको छ । अलजजिरा टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको डकुमेन्ट्रीमा उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलको म्याच फिक्सिङमा संलग्न रहेको आरोप लागेका खेलाडी तथा क्युरेटरलाई…
विश्वकप फुटबलको गीतमा नेपालको झण्डा ( भिडियो सहित )
काठमाडौँ। विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सम्बन्धि गीतमा नेपालको झण्डा पनि समावेश गरिएको छ । आगाली जुन १४ बाट रसियामा हुन गैरहेको विश्वकप प्रतियोगिता सार्वजनिक भएको गीतमा नेपाली युवाले नेपालको झण्डा लिएको दृश्य समेत समेटिएको छ ।…
सन्दिप लामिछानेको समर्थनमा नयाँ गीत बजारमा आयो ! कस्तो बन्यो गित ? (भिडियो सहित)
काठमाडौ : नेपालका चर्चित युवा खेलाडी सन्दिप लामिछानेको समर्थनमा नयाँ गीत बजारमा आएको छ। रक्षा म्यूजिक प्रालिले बजार ब्यबस्थापन गरेको उक्त गीतमा आवाज भने प्रदिप त्रिपाठी र तुलसा जिसी छेत्रीको रहेको छ। यस अगाडी पनि…
पारस खड्काले यसरी अफगानि बलरको धोबी धुलाई ( भिडियो सहित )
काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेट छनोट अन्तर्गत नेपालले अफगानिस्तानलाई एक सय ९५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । टस जितेर पहिलो ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले सबै विकेट गुमाउँदै एक सय ९४ रन बनाएको थियो । नेपालका लागि…
यस्ता छन् बिश्वकप छनोट खेल्ने १० टिमको खेलाडीहरु ( सम्पूर्ण लिस्ट सहित )
काठमाडौं । आइसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप क्वालिफायर अर्को महिना जिम्बावेमा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित १० राष्ट्र बिश्वकपको खाली दुई सिटको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा खेल्ने १० टिम मध्ये नेपाल सबैभन्दा कमजोर तथा…